Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Paul Pogba Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Anyị Paul Pogba Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido ya, ndị nne na nna, ezinaụlọ, nwunye (Maria Salaues), nwatakịrị (Labile Shakur), Ndụ, Net Worth na Ndụ nke Onwe.
Na nkenke, anyị nwere ebe a, akụkọ zuru oke nke ndị na-agba ọsọ French. Akụkọ anyị malitere site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama na egwuregwu ahụ.
Na-eme ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị gụgharịa na ọdịdị nke Paul Pogba'Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ọnọdụ ndụ ya.
Ihe omuma nke Paul Pogba - site na nwata rue oge.
Ee, onye ọ bụla maara na Manchester United bịanyere aka na ya Onye na-eto eto France maka ihe ndebe £ 89m nke Juve na 2016.
Kemgbe ahụ, o gosipụtawo ndị Fans na ọ dị ike, nwere ọgụgụ isi, kee ihe - nwere anya maka ihe mgbaru ọsọ yana nwee mmasị maka ihe ngosi ahụ.
N'agbanyeghị otuto a, anyị ghọtara na ọ bụghị ọtụtụ agụọla akụkọ zuru oke na akụkọ ndụ Pogba. Anyị akwadola ya, maka gị yana maka ịhụnanya egwuregwu. Ugbu a, n'enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị malite.
Paul Pogba Akụkọ Nwata:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha kachasị amasị La Pioche. Paul Labile Pogba mụrụ na 15th nke March 1993 nne ya, Yeo Moriba Pogba na nna, Fassou Antoine Pogba na Lagny-sur-Marne, nke dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ nke Paris, France.
Igwe kpakpando ndị France bụ ọdụdụ nwa n'etiti ụmụ atọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya bụ ndị kwabatara.
A mụrụ Paul Pogba ọnwa ole na ole mgbe mama ya gasịrị, Yeo Moriba hapụrụ Guniea iji biri na France. Obi dị m ụtọ na nwa ikpeazụ ha mụrụ na mba ọzọ nwetara nwa amaala France maka ezinụlọ dị mpako.
Zute nne na nna Paul Pogba - Mama ya (Yeo Moriba Pogba) na nna dị nwayọọ (Fassou Antoine Pogba).
Tupu amụọ ya, Yeo Moriba na Fassou Antoine nwere ụmụ ejima aha ha bụ Florentin na Mathias bụ ndị okenye Paul Pogba.
Themụ nwoke dị obere n'oge nne ha gara mba ọzọ iji sonyere Fassou Antoine (papa ha) nke biri na France.
N'oge ahụ, ha nọgidere na Conakry, Guinea nke bụ obodo ha n'Africa.
N'oge na-adịghị anya mgbe Yeo Moriba biri na France, Florentin na Mathias jikọtara ndị mụrụ ha.
Mụ ejima ahụ (na-ele anya ọchịchịrị) nwere obi ụtọ ịgbanwe nkasi obi nke mummy, ebe ha diri afọ ole na ole siri ike na Guinea, West Africa.
N'ebe a, a hụrụ obere Paul ebe a na nne ya - ha abụọ na-ele ọhụụ, nke na-egosi ihe ngosi nke ihu igwe French.
Ikpe ikpe site n'ile ya anya, ị nwere ike ịsị na Paul Pogba abụrụla nwa mummy kemgbe ọ bụ nwata. N'oge a, Florentin na Mathias (ụmụ ejima ahụ) ka si Africa bịa.
Ihe na-eto eto dị ka Paul Pogba:
Yeo Moriba zụlitere ụmụ ya nwoke atọ (naanị ya) na ụlọ obibi Renardiere na Roissy-en-Brie, ọwụwa anyanwụ nke Paris.
N'ebe ahụ, na ngọngọ 13 na Avenue Auguste Renoir na nnukwu ụlọ a, Paul tolitere na Mathias na Florentin, bụ ndị dị afọ atọ karịa ya.
Nke a bụ echiche zuru ezu nke Obibi la Renardire, Roissy-en-Brie, ala na ụlọ nke Paul Pogba nọrọ n'oge ọ bụ nwata.
Site na nyocha, ọ dịghị ihe ọ bụla na-eyi egwu banyere ebe obibi ebe Yeo zụlitere Pogba.
Ndị bi ebe ahụ nwere omume enyi na nnabata. Ọ bụ ezie na ọgba aghara amalitela na Renardiere ala. O mere ọtụtụ afọ gara aga mgbe Paul Pogba dị obere.
Ndị ntorobịa si mba ọzọ na-eme ngagharị iwe megide ihe ha hụrụ dị ka ịkpa ókè n'ihe niile site na ọrụ ruo na ndị uwe ojii.
Paul Pogba tolitere n'otu agbata obi hụrụ ọgbaghara n'oge ọ bụ nwata.
N'oge ahụ, a na-enwekwa ọgwụ ọjọọ Renardiere ala na ndị omempụ na-anwakarị ịchọta ndị kwesịrị ekwesị, ndị na-eto eto egwuregwu dịka ụmụnne Pogba.
Obi dị m ụtọ na Yeo Moriba nọ na-ele anya. O dobere Paul, Mathias na Florentin ọcha ma hụ na o nweghị onye n'ime ha na-etinye aka na nsogbu ndị otu ọ bụla.
Site na onye ozo, o bu ihe a na - ekweghi ekwe na Renardiere nwere ike iweputa ndi ama ama dika Paul.
Ahmed, otu n'ime ndị agbata obi na ala ahụ kwuru na ọtụtụ ụmụaka si Renardiere na-arụ ọrụ ugbu a n'ụlọ nri na Paris ma ọ bụ dị ka ndị ọkụ eletrik na ndị plọmba.
Taa, ha niile na-arọ nrọ - na-achọ ịhụ ka ụmụaka ha dị ka Paul. Nwoke kachasị nwee ihe ịga nke ọma tolitere na ụlọ.
Paul Pogba Ezinụlọ Ezinụlọ:
Onye na-eto eto French si n’ụlọ gbajiri agbaji. Ndị nne na nna Paul Pogba Yeo Moriba na Fassou Antoine kewara mgbe ọ dị naanị abụọ - n'afọ 1996.
Kemgbe ahụ, na kansụl ndị pere mpe na ime ime ime obodo Paris, nne nke ụmụ atọ jiri nlezianya zụlite ụmụ ya nwoke.
Dika iwu French banyere ịgba alụkwaghịm na nkewa, Yeo Moriba ruru nkwekọrịta udo na ịhapụ di ya ka ya na ụmụaka nwee nkekọ.
N'ihi nke a, Pọl na Nna ya nwere mmekọrịta siri ike. N'eziokwu, nwoke a bụ onye tọrọ ntọala ọrụ nwa ya nwoke.
N'ịkọwa Paul n'oge ọ bụ nwata, Fassou Antoine Pogba kwuru otu oge;
Paul Pogba bilitere site na mmalite dị umeala n'obi wee nwee akụnụba buru ibu. Ndị na-agba ọsọ ụkwụ na papa ya (Fassou Antoine Pogba) dị ezigbo nso n'oge ọ bụ nwata.
Mgbe Pọl bụ obere nwa, ọ chọrọ ịmata ọtụtụ ihe gbasara ndụ. Uche ya ghere oghe, buru oke ibu, gafee afọ ndụ ya.
Paul ama enen̄ede ọdiọn̄ọ ndusụk n̄kpọ. M gbara ya ume ime ọtụtụ ihe na ịgbaso mmasị ya nke o mere na football.
Mgbe m hụrụ Paul na-agba bọl na nke mbụ ya, enwere m ike ịhụ na usoro ya meriri nke ndị ọgbọ ya.
Pọl dị afọ anọ, ya na ụmụ okorobịa ndị tọrọ ya egwuri egwu mgbe nile.
Ezigbo ezinụlọ nke Paul Pogba:
Ọ bụ ezie na a mụrụ ma zụlite ya na France, ndị ịgba ọsọ ndụ sitere na agbụrụ Africa.
Paul Pogba nwere ezinụlọ ya sitere na Democratic Republic of Congo (obodo nne ya) na Guinea, obodo dị n'ụsọ oké osimiri na West Africa ebe nna ya si.
A na-akpọ Guniea mgbe ụfọdụ dị ka Guinea-Conakry iji mata ọdịiche dị na ya na Guniea Bissau na Equatorial Guinea, nke nwere aha na-emegiderịta onwe ya.
Paul Pogba sitere na Guinea, obodo dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ West Africa.
Tupu a mụọ Paul Pogba, Guinea hụrụ mmegbu ndị agha, agha, mmebi iwu ụmụ mmadụ na mbibi akụ na ụba.
Omume ndị a dugara na mbugharị mmanye ka ọtụtụ ụmụ amaala Guinea hapụrụ France. Fassou Antoine gbapụrụ na mba ahụ. Yeo Moriba (nwunye ya) na ụmụ ha ndị ọzọ sonyeere ya ma emechaa.
Mmụta Paul Pogba:
Dị ka ọtụtụ ndị nne na nna nọ na ụlọ obibi nke Renardiere, Yeo Moriba buru ụzọ chee echiche ịga ụlọ akwụkwọ maka ụmụ ya.
Nnyocha nwere ya na Pogba (afọ 6) nwetara agụmakwụkwọ nkịtị na Roissy-en-Brie - ebe ọ nwere mmasị mbụ nke football.
Naanị oge a ga-amalite ịgba bọl. Na-ele anya na-emeghị ihe ọjọọ ma lekwasị anya.
Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, obere Paul nwere mmasị karịa n'ịgba bọl maka ndụ. Ọ gbasoro ndụmọdụ papa ya wee malite ịmalite ọrụ.
N'ịchọ mgbanwe - ijide n'aka na agụmakwụkwọ ya anaghị ata ahụhụ, Yeo Moriba lelitere nwa ikpeazụ ya.
Paul Pogba Football Story (Site na Oge tobọchị).
Dịka ụmụaka, egwuregwu atọ ahụ riri nne na nna ha (n'agbanyeghị na ha kewapụrụ) na-akwado ha.
Yeo Moriba na Fassou Antoine lebara anya n'ihe omume ntụrụndụ nke ụmụ ha. Ná mmalite, ha abụọ nwere obi ike na football ga-abụ naanị ọrụ ezinụlọ.
Maka nna Paul Pogba, ọ bụ maka idozi mmejọ nke oge gara aga. Ọ na-esiri Papa m dara ogbenye ike ịkwụsị nrọ ya.
Fassou Antoine bụ otu onye na - agba ọsọ otu oge na - emeghị ya. N'etiti ndị nne na nna Paul Pogba, ọ bụ onye mbụ mere ka mmasị egwuregwu ahụ banye na ụmụ ya.
Papa Pogba - Fassou ebe ọ bụ na ya na nwunye ya kewapụrụ enweghị ike ịme karịa ndụmọdụ. O mere nke ahụ mgbe nwunye ya bụ Yeo Moriba na-elekọta ụmụ nwoke ahụ.
N'ikwu okwu na mgbasa ozi French banyere ọrụ ya dara ada na otu o si mee ka ụmụ ya, nna nke atọ kwuru otu oge;
N'ụzọ dị mwute, m na-egwuri egwu n'ọkwa dị ala karịa nke m chọrọ igwu. Site na mmalite, achọrọ m ka Florentin na Mathias na Paul gwuo egwu n'ogo kachasị elu.
Enwere m nsogbu na ha mgbe ha bụ ụmụaka ma nke ahụ nyeere ha aka ịmụ ngwa ngwa.
Ọ ruru n'ókè m malitere ịzụ ụmụaka ka ha nwee ike ịgba Paul aka mgbe ọ dị afọ anọ, ise na isii.
M na-agbalị ibulite ya n'ọkwa, ibu karịa afọ ya.
Paul Pogba Biography - Ndụ Mmalite Ndụ:
Mgbe ọ dị afọ isii, nwatakịrị ahụ nwere ihe ịga nke ọma na US Roissy-en-Brie, obere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ naanị 20 nkeji ụgbọala si n'ụlọ ezinụlọ ya.
Paul Pogba kwadoro nkà ya maka oge asaa na klọb tupu ọ nweta ezumike mbụ ya.
Nke a bụ Paul Pogba na US Roissy-en-Brie, obere bọọlụ bọọlụ ebe nrọ rọrọ.
Mgbe Paul Roissy-en-Brie nwere mmetụta dị ukwuu, Paul ghọrọ onye a ma ama n'etiti ndị bi gburugburu ya.
Sambou Tati, enyi ezinụlọ na onye agbata obi nyeere nne Pogba aka site n'ịkpọtụrụ otu ndị ntorobịa kacha mma na mpaghara aha ya bụ US Torcy.
Ọ gwara ha banyere otu diamond a na-adịghị ahụkebe ha nwere n’ihu anya ha, bụ́ nke ha na-ahụghị ya.
Pogba nwere ihe ịga nke ọma nke mere ka ọ sonye na US Torcy. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi ndị otu egwuregwu n'okpuru otu 13.
N'oge ahụ, mgbe ọzụzụ ahụ gasịrị, Pọl na-alaghachi n'ógbè ya ka ọ chọta ndị enyi ya ọzọ ma soro ha gbaa bọl.
Ha mere nke a ruo mgbe chi jiri, ụmụ okoro niile ahụghị ebe bọọlụ nọ. Dị ka Sambou Tati tinye ya;
Paul Pogba bụ onye kacha njọ na mmeri. Ọ pụghị iguzogide ndị otu ya ka ọ na-ebe akwa mgbe niile.
Ọ kacha agbago goolu, ọrụ na-eme ka nne na nna ụmụaka ndị ọzọ na-eme mkpesa na anyaụfụ.
Celta de Vigo na Le Havre Kpọọ maka Brothersmụnna Pogba:
N'ihi na Pọl dị mma, ọ hụrụ ka oge na-aga US Torcy gasịrị. Oge a, ọ bụ nnukwu ụlọ ọgbakọ, Le Havre.
Afọ 2007 na-amị mkpụrụ maka ezinụlọ Paul Pogba. Yeo Moriba na Fassou Antoine dị mpako hụrụ ụmụ ya nwoke ka ha na-enweta ohere ọhụụ na agụmakwụkwọ ka elu.
Themụ ejima ahụ (Florentin na Mathias) gafere ọnwụnwa na Celta de Vigo ebe Pọl nwetara ohere ya na Le Havre Athletic Club dị na Normandy, Northern France.
Yeo Moriba nke nwere oke dị anya nke 1,550.4 km na-ekewa ụmụ ya nwoke, jisiri ha ike.
Comingghọ Le Havre Captain kediegwu na Mpako nke France National youth:
Na Le Havre, Paul ghọrọ ihe ịga nke ọma ozugbo. Na nke abụọ ya, ọ malitere ịkọ ndị otu n'okpuru-16.
Pogba nwere obi ike duru ndị otu ya gaa na njedebe ikpeazụ nke otu egwuregwu ụlọ, na Championnat National des 16 ans. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mmeri na asọmpi ahụ, onye ọ bụla maara na Paul bụ nnukwu kpakpando na ime.
Ọ dịghị ihe ọ bụla tụrụ aro na Paul Pogba agaghị eme ya n'oge a.
Nakwa n'oge nke abụọ ya, Paul kpọrọ obodo ya ka o sonyere ndị otu egwuregwu bọọlụ France n'okpuru-16.
Hụ àgwà ndu ya, onye nchịkwa otu mba, Guy Ferrier mere ya onyeisi ndị isi. N'okpuru nduzi nke Pogba, ndị otu ndị ntorobịa France dere nnukwu mmeri n'ọgụ ebe o meriri nnukwu ihe mgbaru ọsọ.
Ka ọ na-etolite ogo nke mba, ndị nkuzi dịka Pierre Mankowski enweghị ike iguzogide mana ka na-eme ka ọ bụrụ onye isi ụgbọ mmiri. Site n'itinye ihe ngosi ndị ọzọ, Paul ghọrọ ebe etiti mba ndị ntorobịa.
You pụrụ ịhụ akara nke ezigbo onye ndu n’ime ya. Onye na-eto eto ahụ bụ onye isi France na nwata.
Paul Pogba Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ịbụ onye ntorobịa kachasị mma maka France na Le Havre, Pogba n'oge ọ bụla malitere ịmasị mmasị nke nnukwu klọb ndị Europe.
N'ime ndị rịọrọ mbinye aka ya bụ Arsenal, Juventus na Manchester United. N'ihi aha ha, ọ masịrị Red Devils ọtụtụ.
Agha dị n'etiti Le Havre na Manchester United:
Na 31st ụbọchị nke July 2009, Pogba hapụrụ Le Havre iji sonyere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Red Ekwensu. O juru ndị French ahụ anya n'ihi na ha akwadoghị ọrụ Pogba na United.
N'ụzọ dị mwute, onye nọ n'afọ iri na ụma jidere ya na ihe yiri ikpe iwu n'etiti Man United na Le Havre.
Mbido mbụ Paul Pogba na United mere nnukwu esemokwu n'etiti Le Havre na Man United.
Le Havre kwusiri ike na a ga-agbanwegharị mbufe ahụ n'ihi na o mebiri nkwekọrịta na-arịọghị arịrịọ n'etiti ha na nne na nna Paul Pogba.
Otu ụbọchị mgbe e mesịrị, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara nkwupụta gọọmentị na weebụsaịtị ya na-akatọ Manchester United na ezinụlọ Pogba.
Le Havre kwupụtakwara ebumnuche ya ịkwaga okwu ahụ na FIFA onye ha kwenyere na ọ ga-enyocha ọnọdụ ahụ.
Iji mee ka ihe ka njọ, Le Havre President Jean-Pierre Louvel boro ebubo na Pogba nwere mmasị na ego ka ọ na-ekwu na nne ya nyere £ 87,000 na ụlọ site United.
Na nzaghachi, iwe Alex Ferguson gbasasịa, na-eyi egwu ịkpọpụ klọb ahụ. N’ikpeazu, mmeri nye Man Utd biara ka onye ọka ikpe FIFA họpụtara wee kpochapụ klọb ahụ n’ihe ọjọọ.
Oge mmalite nke Paul Pogba na United:
Ntughari mbu echere nke ndi Red Devils mechara mee na 7th nke October 7, 2009.
Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, Pogba nwere echiche ngwa ngwa site n'inyere ndị otu U-18 nke Man United aka ịgbachitere aha ha.
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, onye na-eme egwuregwu na-alụ ọgụ gbagoro n'òtù ndị na-echekwa ha ebe e kenyere ya ịrụ ọrụ Paul Scholes.
Pogba kpọrọ akụkọ mbụ Man United dị ka onye ndụmọdụ ya, onye nyeere ya aka imezue usoro nkesa bọọlụ ya.
Ọbụna mgbe ụfọdụ na-egosi dị ka onye na-eto eto nke United, Pogba nwetara aha ọma maka ịchọta ihe mgbaru ọsọ ogologo oge nke ndị pundits kọwara dị ka piledriver.
Àgwà dị otú ahụ mere ka Pogba nọrọ n'etiti ndị egwuregwu agụmakwụkwọ anọ Alex Ferguson kpọrọ ka ha nwee ndị otu egwuregwu otu egwuregwu.
Nsogbu Paul Pogba na Alex Ferguson - Akụkọ zuru ezu:
N'ihi ikike ya dị ukwuu, onye njikwa akụkọ ama ama nyere nwata ahụ ohere ka ọ hụ etu ọ ga - esi mee egwuregwu nke mbụ.
N'ụzọ dị mwute, ọ na-abụkarị ihe dị ka ọkara nke abụọ na nke a mere ka isi na-ekpo ọkụ na-eme ka Pogba ghara ịdị jụụ. N'okwu ya;
Sir Alex kwenyere na m, mana ọ naghị eji m n'ihi na, dị ka o kwuru, m dị obere ma oge m ga-amalite egwuregwu ga-abịa. Ọ na-anabata m na ọ nwere talent ndị ọzọ iji kwalite.
Ndidi m gwụrụ mgbe ọ họọrọ Rafael zuru ezu maka etiti, mgbe enweghị onye ọzọ maka ọnọdụ ahụ.
Agwara m onye nchịkwa “tinye m ma m ga-egosi gị ma ọ bụrụ na m dị njikere.”N'agbanyeghị nke ahụ, ọ hapụrụ m n'oche wee jikọta Rafael na etiti na Ju Sung Park.
Mgbe ọ jụsịrị Alex Ferguson ajụjụ, onye nchịkwa a ma ama nyere Pogba ntaramahụhụ site na ịjụ ịkpọ ya. Nwa nwoke a dara ogbenye nọ naanị ya.
Asịrị na-ekwu na Paul bere ákwá ọtụtụ na office Ferguson n'ihi etu esi emeso ya. N'oge ụfọdụ, Ferguson were iwe wee ziga ya ịzụ naanị ya.
Akụkọ dị n'etiti Paul Pogba (otu oge United Outcast) na Alex Ferguson.
Iron-chọrọ Yeo Moriba na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ kwenyesiri ike na Pọl chọrọ ka ọ pụọ na ụlọ ya ọ hụrụ n'anya-United.
Ya na ụmụnna Pọl kpebiri na ya agaghị abịanye aka n'akwụkwọ ọhụrụ. Ferguson zigara Patrice Evra ka ọ mee ka Pogba kwenye, nke ahụ arụghịkwa ọrụ.
Na July 3, 2012, onye nchịkwa akụkọ ama ama gosipụtara egwu kachasị egwu nke klọb - na Pogba hapụrụ United gaa Juventus.
N'ikwu okwu banyere nhụjuanya na-aga n'ihu Ferguson nyere ya ọbụna na ụlọ ọhụrụ ya, Pogba kwuru otu oge;
Echetara m Sir Alex kpọrọ ekwentị m izu atọ m hapụsịrị Juventus.
O jiri m mee ihe ọchị ruo nkeji iri abụọ na ise. Ihe kacha ewute m bụ na o jiri Paul Scholes, bụ arụsị m.
Sir Alex kparịrị m ma kwuo ugboro ugboro na adịghị m mma maka ndị otu ya. Ọ boro m ebubo na enweghị nsọpụrụ United.
Akụkọ ndụ Paul Pogba - Akụkọ ịga nke ọma:
Na Italytali, Pogba nwere ọganihu nke ukwuu. Ọ buliri egwuregwu ya n'ọkwa ọzọ n'ihi na ọ nwere oge egwuregwu ọ na-achọ mgbe niile.
N'oge ya na Turin, mmekọrịta ya na ya dị egwu Claudio Marchisio na Arturo Vidal na-enyere Juve aka imeri aha Serie A anọ n'usoro, iko Super Italian abụọ, na Coppa Italia abụọ.
Na nsụgharị ọzọ nke Paul Pogba ihe ịga nke ọma, ọ ghọrọ nwa nwoke na-esote France ka mba ahụ kwadoro Euro 2016.
Les Bleus bụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị iji merie asọmpi ahụ na Pogba ghọrọ nwoke kpakpando.
Na ọrụ ya dị egwu n'akụkụ Antoine Griezmann, ọ nyeere France aka iru nke ikpeazụ, naanị otu meriri 1-0 Cristiano Ronaldo si Portugal.
Mgbe obi mgbawa Euro 2016, onye na-eme ihe ike na-eche na ọ ga-akpọ ya na Manchester.
Ebe Alex Ferguson anọkwaghị n'ọchịchị, Pogba na nnwapụta mama ya kwetara na onye nkuzi Juve, Antonio Conte kwesiri ibido ihe akpọrọ ire ere ụwa.
Na 8 August 2016, Pogba laghachiri Manchester United maka ego nkwụnye ego kachasị elu na € 105 nde (£ 89.3 nde) - karịrị nke Gareth Bale.
N'okpuru njikwa nke Jose Mourinho, Pogba (na oge 2016-2017) nyeere United aka ibuli EFL Cup na UEFA Europa League.
Isi ihe ọzọ dị na akụkọ ịga nke ọma Paul Pogba bịara na 2018 - afọ ọ kwụrụ mba ya ọ hụrụ n'anya ụgwọ 2016 ochie.
Dịka akụkụ nke ndị otu egwuregwu France maka FIFA World Cup na Russia, Paul Pogba gosipụtara ikike ọchịchị na-enweghị isi - ngosipụta nke ụbọchị onye isi ntorobịa ya.
Yana ndi amara dika Kylian Mbappe na Ngolo Kante, Star na-alụ ọgụ nyeere France ọ hụrụ n'anya aka ibuli nnukwu asọmpi FIFA 2018 World Cup.
Inweta nnukwu ihe a wetara ya Legion of Honor award. Nke a bụ usoro kachasị elu na ikike na France.
Pogba Paul Pogba kwuru ọtụtụ okwu siri ike nke mere ka France merie FIFA 2018 World Cup. Choo vidio a chiputara ebe a.
Okwesiri ikwuputa na onye ọkpụkpọ dika Paul Pogba na-anọchite anya otu ụzọ dị egwu na bọlbụ ụwa.
Ọ bụghị naanị banyere ntutu isi ya na ejiji ejiji ejiji, mana ụdị egwuregwu ya na omume ndu ya mere ka ọ bụrụ onye hụrụ ọgbọ ya n'anya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme
Banyere Nwunye Paul Pogba - Maria Salaues:
Ọ bụ nwanyị mgbe obi La Pioche gachara. A mụrụ na 16th ụbọchị nke November 1994, a họpụtara Maria Zulay Salaues dị ka nwunye Paul Pogba.
WAG mara mma bụ nwanyị South America, onye Bolivian mụrụ ma zụọ ya na ndị nne na nna bara ọgaranya - nzụlite bara ọgaranya.
Maria Salaues Pogba gụrụ nchịkwa nchịkwa azụmahịa na Mahadum Bolivia tupu ọ kwaga United States - na-emechaghị usoro ya.
Ọ malitere ọrụ dị ka onye na-elekọta ụlọ na Miami tupu ọ kwụsị ịchụso ọrụ dị ka ihe nlereanya.
N'afọ ahụ 2017, Maria Salaues zutere ma hụ Paul Pogba n'anya. Birdshụnanya nnụnụ ahụ enweghị ike ijide mmetụta ha ka ha mere ọnwa mbụ ha n'ihu ọnwa ole na ole ka e mesịrị.
O juru ndị na-agba bọọlụ anya na enyi nwanyị ọhụụ nke Paul Pogba onye mechara bụrụ nwunye ya.
N'ihi àgwà ya pụrụ iche, Maria Salaues enweghị nsogbu ịnweta nkwado Yeo Moriba ka ọ bụrụ nwunye n'ọdịnihu nke nwa nwoke ikpeazụ ọ mụrụ.
Dịka ihe akaebe banyere ịhụnanya, nne Paul Pogba na nwunye nwa ya hụrụ n'ọtụtụ njem dị mkpa. Nke a mere ka ndị agbụrụ kwenye na ha abụọ enwetawo ịhụnanya maka ibe ha.
Ọganihu ngwa ngwa na June 2018 (n'oge FIFA World Cup) Maria Salaues pụtara iyi mgbanaka njikọ aka nke na-egosi na Paul chọrọ.
Ọ gara nọrọ n’akụkụ Yeo Moriba na Stadium Luzhniki dị na Moscow n’oge egwuregwu France n’egwuregwu otu egwuregwu na Denmark.
Ihe ọzọ ndị Fans nụrụ, bụ akụkọ banyere agbamakwụkwọ asịrị n'etiti Paul Pogba na Maria Zulay Salaues.
Onweghi ọkwa ọkwa sitere na di na nwunye belụsọ mgbanwe na nwunye Pogba na mgbasa ozi mmekọrịta. O mechiri akaụntụ Instagram ya ma weghachite ya na aha ọhụrụ "Maria Zulay Pogba Salaues".
Site na nke a, Fans kwenyere na ụdị Bolivian na Pogba lụrụ di na nwunye.
Kedu ndị bụ ụmụ Paul Pogba?
Onye egwuregwu bọọlụ na-alụ ọgụ, dịka na mbido 2021, nwere nwa nwoke aha ya bụ Labile Shakur, na-enweghị nwa nwanyị.
Paul Pogba na Maria Salaues, nabatara nwa mbụ ha na otu nwa ha n'ụbọchị 5th nke Jenụwarị 2019. Ịnọ na nwunye ya mgbe ọ mụrụ nwa bụ n'ezie oge na-agaghị echefu echefu maka Paul.
Ruo ọtụtụ ọnwa mgbe a mụsịrị ya, Pogba na Maria gbalịrị igbochi Labile Shakur pụọ n'anya ndị mmadụ.
Ka oge na-aga, ma ndị hụrụ ya n'anya enweghị nhọrọ ọ bụla ma ha ga-amalite ịkọwa ya na akaụntụ mgbasa ozi ha.
Ọhụụ Paul Pogba maka Nwa, Labile Shakur:
Ọchịchọ o nwere maka nwa ya nwoke dị mfe. Nke mbu bu ime ka o nweta ndu kachasi nma.
Nke abuo bu ichoputa atumatu iji hu Labile Shakur ka o noo ndu ndi ezinulo ya mgbe ya (Paul Pogba) choro ije oma.
Onye na-agba ọsọ ogologo oge maara ụzọ isi edozi nwa ya nwoke. Lee ụfọdụ oge nna-nwoke, nke gosipụtara ịhụnanya na nlekọta
Labile Shakur Pogba dị afọ 3 na ọnwa 0. Site n'enyemaka Papa ya, nwata ahụ, n'oge na-adịghị anya, ga-aghọta ihe ọdịnihu ya.
Paul Pogba na-azụlite Labile Shakur mgbe niile n'ụzọ ọ ga - abụ onye ọkpụkpọ bọọlụ ọkachamara - ọbụlagodi karịa ya.
Bụ onye nne na nna dịịrị Paul mfe. Ọ nwere nnukwu nchịkọta echiche eji egwu maka ezinụlọ ya ọbụlagodi nke gụnyere isonye na ịma aka egwuregwu bọọlụ mgbasa ozi.
N'ime otu n'ime - (egwuregwu anụ ahụ), Maria na Paul nwere ihe ka mma nke Shakur.
Paul Pogba Mmekọahụ gara aga- (Ex-Girlfriends):
Tupu Maria Zulay Salaues abia n'ime ndu ya, enwere nwanyi ozo.
N'akụkụ a, anyị na-akọwa nkọwa zuru ezu, mmekọrịta gara aga nke Paul Pogba. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Paul Pogba, Lisa Thiolon Storyhụnanya Akụkọ:
Ndị na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ na-akpọ ya brunette mara mma nke nwere ihu gị na-adị gịrịgịrị ma dịkwa ụtọ. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Lisa Thiolon, nwa agbọghọ nke na-abanye na mberede.
Paul na Lisa kwekọrọ ekwekọ n'oge ahụ - naanị maka mmekọrịta ha na njedebe maka ebumnuche amaghị. Ugbu a, ka m gwa gị ntakịrị ihe banyere enyi nwanyị mbụ nke Paul Pogba.
Mgbe ọ nwụsịrị, Lisa Thiolon sonyeere IDRAC Business School na Paris ebe ọ nwetara akara diplọma ya.
Dị ka asụsụ zuru oke, ọ chọtara ụzọ ọ ga Italytali. Na 2013, Lisa Thiolon nwetara ọrụ na Juventus, dịka Onye Nlekọta Ihe Omume na Nnabata Ọbịa.
Nke a bụ ebe ọ zutere, ọ hụrụ n'anya wee bụrụ enyi nwanyị Paul Pogba.
Otu akụkọ mgbasa ozi nwere na Lisa Thiolon (n'ihi ịhụnanya) hapụrụ ọrụ ya iji soro ya Paul gaa England mgbe ọ bịanyere aka na Man United.
O di nwute, enweghi mmekorita ha na obodo ohuru. N'agbanyeghị aha enyi ya nwoke, ọ ka nwere ezi uche na mgbasa ozi ma ọ nweghị onye maara ihe kpatara ya ji gbapụ nwoke mbụ Juve.
Paul Pogba Ndụ Nke Onwe:
N'ebe a, anyị ga-enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ. Paul Pogba onye na-apụ apụ, onye nwere obi ike na ọha mmadụ.
Ewezuga football, onye na-eme egwuregwu na-enwe ọchịchọ ma nke ume. Pogba hụrụ ige ntị na ịgba egwu, na-eyi uwe na-ewu ewu na ọla.
Pogba bụ nwoke nwere ọchị ọchị pụrụ iche, ọgụgụ isi, nwee nnukwu ọchịchọ, onwe ya ma nwee echiche dị mma na ndụ. Anyị achịkọtara vidiyo nke gosipụtara nnwere onwe ya mmụọ.
Paul Pogba Nchịkọta Ntutu:
Ihe a na-ahụ anya na ndị ịgba ọsọ ụkwụ bụ isi ya na-akpụ isi - njirimara nke mama ya (Yeo Moriba) nwere aka.
Paul Pogba gosipụtara n'otu oge na mgbanwe na-adịghị agwụ agwụ na ntutu isi ya sitere na nne ya nke kpaliri ya n'ime ya. Anyị ahọrọla ụfọdụ nchịkọta kacha mma nke edozi isi nke Pogba.
Paul Pogba Nkata ntụrụndụ:
Site na uto nke otu afọ na USA, enwere ọtụtụ ịhụnanya ịgagharị. Paul Pogba so na ndị na - agba bọọlụ bọọlụ bọọlụ na NBA.
Ọ hụrụ ịga egwuregwu NBA basketball na onye ọ na-egwuri egwu kachasị amasị ya Romelu Lukaku.
A hụrụ Pogba na nwunye ya Maria Salaues na US ọtụtụ oge na njegharị basketball.
Site na ihe o yiri, ọ na-egosi na ọ bụ onye na-akwado ọtụtụ otu ndị ama ama n'etiti ha bụ Miami Heat na ndị isi ala. Anyị akwadebewo vidiyo nke nkà Paul basketball.
Paul Pogba na-arụ ọrụ oge:
Pogboom, dika a na-akpọ ya aha, nwere ọdịiche na ọzụzụ siri ike. Ọ na-eji nke ahụ iji melite ikike ịgba egbe ogologo ya, nka na ikike ọlanarị.
Mgbe ị na-ebugote vidiyo mgbatị hardboxing site na Instagram, ndị ịgba bọọlụ kwuru otu oge;
Onye ọ bụla nke na-anwa imebi m nwere ike ịbụ ihe ijuanya jọgburu onwe ya. Kpọọ ya ka ọ bụrụ ngosipụta ma ọ bụ nkwali, ọ na-enye m otu nsonaazụ ahụ na njedebe.
Anyị achịkọtara ụfọdụ vidiyo vidio La Pioche iji mee ka ị nwee obi ụtọ ma kpachara anya maka ikike ya.
Paul Pogba Ndụ:
N’akụkụ a, anyị ga-eme ka ị mata ụzọ o si ebi ndụ. Mara ihe onye mmeri nke World Cup nke 2018 na-akụ nnukwu ego ya ga-enyere gị aka ịmatakwu ụdị ndụ ya. Ka anyị bido n'ụgbọala ya.
Paul Pogba arsgbọ ala:
Ụgbọ ala Paul Pogba nwere bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a ma ama na nke a maara nke ọma dị ka ya. Ndị na-agba bọọlụ France na-eche ihu ụgbọ ala kacha dara okomoko, dị oke ọnụ na teknụzụ dị elu dị n'ahịa.
Ọ hụrụ ụdị ụgbọ ala Audi n'anya, nke ga-alaghachi ma ọ bụ na-acha ọcha. Lelee ụfọdụ n'ime ha ebe a.
Pogbalọ Paul Pogba:
Onye France a na-achọ mma nwere okomoko nke iji ehihie na abalị na-anọ n'ụlọ ya nke dị ka nnukwu ụlọ.
N'okpuru ebe a, ụlọ Paul Pogba dị n'otu n'ime ebe ndị kachasị ama ama na Manchester.
Ndị ọgba bọọlụ ji ọtụtụ nde mmadụ biri ndụ ka eze n'obí ya England. Ugbu a, ka anyị duru gị gaa njem nke ime ụlọ ndị mara mma na ndị isi nke ụlọ Paul Pogba.
Maka Pọl, oge ezumike bụ oge kachasị mma iji jikọọ, gbasaa ịhụnanya na ememe ndị nọ ya nso. Ya na nwunye ya Maria na nwa Shakur, mejupụtara obere ezinụlọ na-akpali akpali.
Pogba anaghị akwụsị itu n'anya ihe karịrị nde 40 IG ndị na-eso ụzọ ya nke ezumike ezumike ya mara mma.
Paul Pogba Ndụ Ezinụlọ:
Naanị onye na-enye ezinụlọ nri bọọlụ na-aghọta ọnụọgụ nke ịchụrụ iji ghara ịhapụ ndị hụrụ n'anya dabere.
Ewezuga bọọlụ, Paul Pogba maara ọrụ ya nye ọtụtụ ndị a. Ndị a abụghị naanị ezinụlọ, mana ndị ikwu (nwanne nna, nwanne nne, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya) ndị na-elegara ya anya - onye na-elekọta ha.
Lifebogger na-eji ngalaba a agwa gị ihe ndị ọzọ gbasara nne na nna Paul Pogba, ụmụnne ya na ndị ikwu ya. Yak itọn̄ọ ye ibuot ubon.
Banyere Paul Pogba Nna:
Zute Fassou Antoine Pogba, nna nke otu onye egwuregwu bọọlụ kachasị ọnụ na ụwa.
Amụrụ na 1940s, Fassou Antoine Pogba nọrọ n'oge ọ bụ nwata na Guinea dị ka onye ama ama ama egwuregwu bọọlụ.
Mgbe ọ dị afọ 30, ọ kwagara Paris - na-enwe olileanya ịga n'ihu n'ọrụ ya. N'ụzọ dị mwute, Fassou m nwere ohere ole na ole ma manye ya ịhapụ football na ihu ọmụmụ ihe.
Mgbe ọ lara ezumike nká n'ike, ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka onye nkụzi ụlọ akwụkwọ gburugburu Roissy-en-Brie. Fassou Antoine Pogba mechara gbanwee na nkwukọrịta tupu ezumike nká ya n'ihi nsogbu ahụike.
Ewezuga ndụ ya dị ka injinia telivishọn, ọ bụ ezigbo nwoke ezinụlọ nke hiwere omume mgbe niile ịkpọrọ ụmụ ya nwoke na ndị enyi ha ka ha gbaa bọọlụ.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eji ego nke aka ya na ha na-aga na-ekiri klọb dị na mpaghara, Marseille (ụlọ nwata nwoke nke Paul).
N'ihi nkewapụ ya na nwunye ya bụ Yeo Moriba, Fassou Antoine dị anya site na ụmụ ya, ọkachasị n'oge ha dị afọ iri na ụma.
Ọ bụ ezie na ọ naghị etinye aka na azụmahịa nwa ya nwoke (football), a na-akwụ ya ụgwọ maka ịtọ ntọala nke ọrụ ha.
Dị ka e kwuru na mbụ, Fassou Antoine mere ka ụmụ ya rute oke ka ha wee nwee ihe ịga nke ọma ebe ọ dara na football.
Mmekọrịta Paul Pogba na Nna ya:
Ndị na-agba ọsọ na-ahụ papa ya dị ka nwoke dị umeala n'obi ma nwee udo. Paul Pogba na mbụ emeghị ka ya na ya nwee mmekọrịta chiri anya ma mezie ya ka ọ ghọrọ onye a ma ama.
N'adịghị ka nwunye ya mbụ, Fassou Antoine nwere ahụ iru ala na idebe profaịlụ dị ala.
Paul Pogba mere ka ọ dị mkpa ka ya na ndị mụrụ ya dịrị n'otu wee mefuo oge furu efu ya na Nna ya nke na-adịghị ezi ahụike.
Fassou Antoine nwere obi ụtọ na ya na nwunye ya jikọtara ọzọ wee soro ụmụ ya nwee mmekọrịta dị mma tupu ọnwụ ọjọọ ya.
Nna Paul Pogba nwụrụ mgbe ọ dị afọ 79 mgbe ọ rịasịrị ọrịa na-adịte aka - na Fraịde ụbọchị iri na abụọ nke Mee 12.
Otu n'ime ihe ncheta kachasị mma nke Paul Pogba banyere nna ya na-akụziri ya otu esi eme egwuregwu bọọlụ ya Dab. Chọta vidiyo nke mbubreyo Fassou Antoine na-eme Dab tupu ọnwụ ya.
Banyere nne nne Paul Pogba:
A na-akpọkarị ya Mamso, Yeo Moriba Pogba bụ ụbụrụ azụmaahịa n'azụ otu bọọlụ kachasị ọnụ n'ụwa niile.
Onwere ụdị swagger eke banyere azụmaahịa azụmaahịa bọọlụ - nwanyị na-enweghị isi nke kụziiri nwa ya nwoke ka ọ dị mma.
Mmekọrịta Yeo Moriba na nwa ikpeazụ ọ mụrụ amụrụ ihe pụrụ iche site na nwata. N'ezie, Paul Pogba nwere obi ụtọ dị ukwuu nke nwa ọhụrụ nke mmetụta ezinụlọ.
Akụkọ na-egosi na ọ bụ mama ya kpasuru ya iwe nke ukwuu nke mesoro ya ihe n'ụzọ dị iche na ụmụ ya ndị nwoke.
Nne nke Paul Pogba nwetara ọtụtụ ewu ewu mgbe ọ nwụsịrị nke a na-achọ ígwè
Ferguson maka ọgwụgwọ nwa ya. Dị ka ya si kwuo,
"MGBE FERGUSON na-abịa n'ụlọ m, a na m ejide n'aka na ọ hapụrụ nkụda mmụọ.
M na-agwa ya mgbe niile, Ọkpara m Paul agaghị edebanye aha ọzọ n'akwụkwọ nkwekọrịta ya.
N'ihi nke a, FERGUSON KWESỊRỊ YA, Ọ KWỤGHỊ YA, BABY PAUL BỤ NAANYA.
Ọ BỤDỊDỊ KA Ọ KWESỊRỊ n'Ọfịs FERGUSON KA ESI EMESO YA.
PAUL POGBA were iwe na PAUL SCHOLES si na ezumike nka ọnwa isii lọta na Jenụwarị 2012 iji napụta otu ogige etiti jikọrọ ọnụ nke o lepụrụ anya.
Naanị afọ 18 n'oge ahụ, POGBA chere na ekwesịrị inye ya ohere.
Nke a mere ka nwa m nwoke kpebisie ike ịpụ na klọb ahụ”.
N'agbanyeghi nsogbu anyi niile, OTU ihe ebube ka na-eme.
Nwa m nwoke ghọrọ ihe ọkụkụ ozugbo na JUVENTUS. N'oge a, ị ga-asị na amaara m ntakịrị gbasara bọọlụ, enwere m ike ịbụ nne nkịtị mana ọ nweghị onye nwere ike ịghọgbu m n'azụmahịa a,"
Onye okpukpe Alakụba ji okpukpe kpọrọ ihe wee mee ka nwa ya nwoke (Paul Pogba) ghọọ ọtụtụ nde dollar n'oge na-adịghị anya.
Asịrị na ọ bụ onye nnọchi anya nwa ya, onye njikwa na onye ndụmọdụ, Yeo Moriba enwetawo akụnụba na ike dị ukwuu mgbe ọ na-ewulite alaeze azụmaahịa bọọlụ ya.
Mmegharị mbụ nke Paul Pogba mgbe ọ malitere ịkpata nnukwu ego ka onye ọkpụkpọ United na-azụ Yeo ụlọ ọhụrụ na Bussy-Saint-Georges, bụ obodo na-aga njem dị nso na etiti Paris.
Mama ahụ dị mpako maara na ụgbọelu ndị nkịtị, ụgbọala ndị na-agba ọkụ na ọtụtụ ego a na-atụba Pọl apụtaghị ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ịhụnanya ọ nwere maka ezinụlọ ya.
Ikpe ikpe site na vidiyo dị n'okpuru, ị ga-ekwenye na m bụ Paul Pogba bụ arịlịka nke ndụ nne ya.
Enwebeghị, ọ gaghị adịkwa, ihe ọ bụla pụrụ iche dịka ịhụnanya dị n’etiti Pọl na Yeo Moriba.
Paul Pogba Brothersmụnna:
Onye na-eme ọkpọ ọkpọ igbe na-abịa site n'ụlọ 'Testosterone'. Nke a bụ ụlọ nke ụmụnne na-achị ma ọ nweghị nwanne nwanyị.
Eldermụnna ndị okenye Paul Pogba - Florentin na Mathias bụcha ndị egwuregwu bọọlụ na ejima yiri nke ahụ - afọ abụọ toro ya.
Foto dị n'okpuru ebe a, ụmụnne abụọ ahụ enwetaghachila ụmụnne ha ndị obere kemgbe ha bụ nwata.
Amụrụ ejima ahụ nye Yeo Moriba na Sọnde, ụbọchị 19 nke Ọgọstụ 1990 na Conakry, Guinea.
Boysmụ nwoke atọ ahụ bụ ndị Fans Marseille dị ka ụmụaka na oge nwata ha a na-echefu echefu bụ n'oge ekeresimesi nke 1998 mgbe ha niile gara ma nọrọ na Santa Santa.
Littlemụntakịrị nwoke atọ ahụ tolitere wee bụrụ ndị na-agba ụkwụ abụọ na Paul bụ kpakpando nke ezinụlọ ha. Florentin Pogba
Anyị na-ahụ ihe abụọ ọzọ ụmụnne Pogba nwere. Nke mbu, onye obula n’ime ha weputara igwu egwu tennis - mana ndi n’abia ama.
Nke abuo, ha bu ndi klas egwu egwu. Anyị nwere otu akaebe nke gosipụtara egwu ha na-akpali ewu ewu amaara dịka ndị Pogbance.
Banyere Florentin Pogba - Nwanna Paul Pogba:
Amụrụ na 19th Day nke August 1990, ọ bụ ndị ọkachamara na-egwu egwuregwu Guinea (onye isi mba) na-egwuri egwu. Florentine tolitere na-akwado Arsenal - na-agbaso oge ha a na-apụghị imeri emeri.
N'otu oge, ndị na-agba bọlbụ bọọlụ zuru ụwa ọnụ hụrụ ọhụụ dị ụkọ nke otu ezinụlọ Paul Pogba si nọrọ nso.
Nke a mere mgbe ụmụnne abụọ; Florentin na Paul chere ihu na ibe ha na Old Trafford.
Ọ bụ ụbọchị ahụ Zlatan Ibrahimovic jidere ya okpu mbụ ya na uwe elu United ka ndị agha ahụ meriri Saint-Etienne n'ụzọ doro anya.
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, ndị agbụrụ anọghị mgbe ha tosịrị dike ha. Ọ bụ ụmụnna Pogba dọtara ọtụtụ uche ụbọchị ahụ. N'ihe banyere 2021, Florentine na Sochaux na-egwu egwu.
Nwunye Florentin Pogba bụ Sarita. Ha abụọ lụrụ na Fraịde, 13th nke December 2019, n'ụlọ nzukọ obodo nke Bussy-Saint-George (Seine-et-Marne).
N'okpuru ebe a bụ vidiyo nke agbamakwụkwọ Florentin Pogba na Sarita. Ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa gụnyere ndị ikwu Paul Pogba gbara gburugburu 150.
Banyere Mathias Pogba - nwanne Paul Pogba:
Amụrụ na ụbọchị iri na iteghete nke ọnwa Ọgọstụ 19, ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ na mba Guinea na kwa onye egwuregwu tennis.
Mathias Fassou Pogba bụbu kpakpando na-egbuke egbuke nke France na tebụl tennis n'oge ọ dị afọ iri na ụma. O meriri asọmpi U12 nke egwuregwu maka mpaghara French ya.
Agbanyeghị na tebụl tebụl abụghị ihe mgbaru ọsọ ya, Yeo Moriba mere ka ọ nọrọ na bọọlụ.
N'adịghị ka Florentine, ọ na-ewu ewu ma dị nso na Paul. Nke a bụ n'ihi na ọ na-egwuri egwu maka ụfọdụ ndị otu Bekee ọkachasị n'etiti ha bụ Crewe Alexandra - ebe o meriri ọtụtụ goolu. Ọ bụ onye na-arụsi ọrụ ike na ntọala Paul Pogba.
Mathias Pogba bụ onye ọchụnta ego. O nwere La Ruche Ink & Barber Tours dị na 97 Rue Nollet, 75017 Paris, France.
Nke a bụ ebe Paul Pogba na-akpụ ntutu ya oge ọ bụla ọ gara France. Ndị ọgba bọọlụ bụkwa onye nwe 48hour Laguinee, NGO nke na-ahazi egwuregwu na egwuregwu maka ndị Guinea na ndị ọzọ Africa.
Paul Pogba Ndị ikwu:
N'ezie, onye na-eto eto Les Bleus nwere mmasị na ụkpụrụ ezinụlọ. Paul - n'agbanyeghị na ọ na-arụsi ọrụ ike - ọ na-ewepụta oge iji gaa ma soro onye ikwu ya nwee mmekọrịta.
Otu n'ime ndị ahụ bụ nwanne nna ya nwoke na-arịa ọrịa, bụ onye tara ahụhụ na nwute ọria kansa.
Nwanne nna Paul Pogba jiri oche nkwagharị na-agwọ ọrịa n'oge niile ọ na-arịa ọrịa, nwa ya nwanyị nke Paul Pogba na-akpọ nwanne ya nwanyị lekọtara ya.
Ndị na-agba ọsọ bọọlụ nwere mpako isoro nwanne nna ya kerịta oge ọma tupu ya agafee. Otu n'ime ndị ahụ na-eme ya ka ọ nwee mmetụta nke iko mba ụwa nke nwa nwanne ya meriri.
Ndị nne na nna ochie Paul Pogba nwere ike ịbịa n'oge mgbe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ikwu ya bi na Guinea na Congo (mmalite nne na nna ya).
Ka o sina dị, anyị nwere otu n'ime ndị ikwu ya - nne di ya. Ọ bụ Maria Zulay Salaues 'Mum.
Zute otu nne na nna Maria Zulay Salaues - Mama ya. Ọ bụghị na ọ mara mma?
Paul Pogba Eziokwu Eziokwu:
N'ịga njem site na ndụ Life Story nke Pogba, anyị ga-eji ngalaba a kpughee eziokwu (ụfọdụ) ị maghị banyere Superstar Superstar.
Eziokwu # 1 - Paul Pogba Manchester United rygwọ ọnwa Salary na Net Worth:
Nweta ego na Euro (£)
Kwa Afọ € 17,147,116 £ 15,103,200 $ 20,647,207
kwa ọnwa € 1,428,926 £ 1,258,600 $ 1,720,600
Kwa Izu € 329,246 £ 290,000 $ 396,451
Kwa .bọchị € 47,035 £ 41,429 £ 56,636
Kwa elekere € 1,959 £ 1,726 $ 2,359
Kwa Nkeji € 32 £ 28 $ 39
Sekọnd 0.54 £ 0.48 $ 0.65
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Paul Pogba's Bio, nke a bụ ihe ya na United rụpụtara.
Nwa amaala nke Manchester nke na-akpata £ 19,499 kwa afọ ga-arụ ọrụ afọ iri na anọ na 10 ọnwa ime ọnwa Paul Pogba.
Isi nkwado Pogba bụ azụmahịa afọ iri ya na onye na-emepụta egwuregwu egwuregwu Adidas - bịanyere aka na ya na 2016. companylọ ọrụ ahụ kwụrụ ya ụgwọ dị nde £ 31 ($ 40m).
Mgbe afọ ole ọ na-akwụ ụgwọ ọrụ, nkwado na ego gbakọtara, ọnụego Paul Pogba nke 2021 dị ihe dị ka $ 200 na $ 250.
Eziokwu # 2 - Banyere Paul Pogba Ring:
Mgbe 2018 FIFA World Cup, midfielder na Antoine Griezmann mepụtara echiche nke ha nwetara site na mmụọ ike Superbowl.
Ha zụtara mgbanaka ncheta dị ka onyinye maka ndị mmeri France World Cup. Ihe ọla ahụ na-echetara ha mmeri ha. Mgbanaka Paul Pogba na-efu $ 13,500 (£ 10,260) - maka nke ọ bụla.
Eziokwu # 3 - FIFA Ike na adịghị ike:
N'agbanyeghị ogo ya na Manchester United, Paul Pogba ka na-achị achị dị ka otu n'ime ndị kachasị etiti egwuregwu bọọlụ bọọlụ.
N'iji ike dị ukwuu dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a, adịghị ike ya ka dị; osooso, ịta, itule, ịgafe na imecha.
A na-atụle Paul Pogba nke ukwuu Bruno Fernandes onye ka onye ka ya mma.
Eziokwu # 4 - Okpukpe Paul Pogba:
Powerlọ ike French bụ onye ụka site n'okwukwe. Mgbe ọ nọ na bọl, ọ na-ahụkarị ka ọ na-ekpe ekpere dị nkenke tupu egwuregwu.
N'agbanyeghị nnukwu ọchịchọ ịbụ onye na-agba ọsọ ụwa, Paul Pogba nwere ọdịnala Islam siri ike na nkwụsị. Ọ na-eso ma na-asọpụrụ ọdịbendị ndị Arab.
Nkwenkwe okpukpe Paul Pogba adịghị emetụta ndụ ya ka ọ na-azụ ma na-egwu egwuregwu n'oge Ramadan dị nsọ.
Onye French abughi ezigbo onye Muslim site na nwata - mgbe nne ya webatara ya na okwukwe.
Pogba bụ onye nlereanya nye ọtụtụ ndị ọgba bọọlụ Alakụba. Ọ na-etinye okwukwe okpukpe ya na ịhụnanya nke ezinụlọ karịa ihe niile.
Nke a bụ vidiyo nke Pogba ka ọ na-egosipụta oke ịhụnanya maka okpukpe ya - Islam.
Eziokwu # 5 - Maria Saluesa ọ bụ onye Alakụba?
Nwunye Paul Pogba si n'ezinụlọ Ndị Kraịst. N'ezie, aha 'Maria' bụ aha Hibru nke Akwụkwọ Nsọ.
Echere na alụmdi na nwunye Maria Zulay na Paul Pogba emeela ka ọ gbanwee Islam. Na-ekpe ikpe site na uwe ya, ekwenyere na ya bụ Muslim.
Eziokwu # 6 - Paul Pogba taller karịa ụmụnne ya?
Na mpempe akwụkwọ, Florentin yiri ka ọ bụ onye kachasị elu. Ọ na-eguzo na elu 1.92 m nke dị ụkwụ isii na sentimita 6. N'aka nke ọzọ, ma Paul ma Mathias guzo na 3.5m nke dị sentimita 1.91ft 6 n'ogologo.
N'ime nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, anyị chọpụtara na nkwupụta ahụ dị n'elu anaghị egosipụta eziokwu. N'oge agbamakwụkwọ Florentin na Sarita, ụmụ nwoke atọ ahụ gbakọtara maka otu foto.
Iguzo n'otu ala larịị, Paul Pogba (nke ikiri ụkwụ kachasị ala) dị ka ọ kachasị nke ụmụnne ya.
Eziokwu # 7 - Paul Pogba Ezigbo Enyi:
Mgbe ọ nọrọ afọ abụọ gara aga ntorobịa ya na Manchester United (site na 2009 ruo 2011) Pogba zutere wee bụrụ enyi na Jesse Lingard.
Ndị egwuregwu bọọlụ abụọ enwetala trophies ọnụ na nke kachasị mkpa, ndị nwere obi ụtọ nwere mmasị na usoro ịgba egwu ha.
Ewezuga ịgba bọọlụ, ndị duo ahụ jiri obi ụtọ lee egwu egwu - ọkachasị nke onye omenkà amụrụ na Naịjirịa, Wizkid wepụtara. Vidio a chịkọtara bromance dị n'etiti Pogba na Lingard.
Eziokwu # 8 - Nkọwa nke Nicknames Paul Pogba:
Ndị mbụ n'ime ha bịara mgbe ọ nọ na Juventus. Aha otutu ahụ - 'Paul the Octopus' - sitere na Octopus a ma ama aha ya bụ Paul. Ndị mmadụ na-eji ya maka ịkọ egwuregwu n'oge 2010 World Cup.
Paul (Ugbu a Ọgwụgwụ) ka a nụrụ na ndị Global Sports Betting Billionaire Owners gburu ya.
Anumanu a mere ka ha ghara ijeri mmadu dika o buru amụma nke oma n'egwuregwu bọọlụ nke ụwa site na ịdabere na igbe - nke pụtara na mba ahụ ga-emeri egwuregwu ọzọ ya
Pogba nwetara aha ya 'Paul the Octopus' n'ihi ogologo oge ya, nke na-agbanwe agbanwe na ogologo aka nke ndi mmadu nwere obi uto.
Ha na-ekwu na ụkwụ ya yiri akwa nke octopus mgbe ọ na-akụ, na-agba ọsọ, dribbles ma tie ogologo oge.
Pogbamụnna nwoke ndị okenye Paul Pogba nyere ya aha ahụ 'Ogbenye'N'ihi mgbalị ndị ọ na-eme ogologo oge na ihe mgbaru ọsọ.
Edere onye na-agba egbe ogologo oge ka edere ya na buut ya. N'ikpeazụ, aha otutu aha otutu ndi mmadu bu La Pioche.
Bọchị ndị a, kpochapụwo trope nke oge a football bụ na nnukwu kpakpando (dị ka Kylian Mbappe) ga-esi n'okporo ámá ndị siri ike na-enweghị atụ, na ime nke a, gbanahụ ndụ mpụ.
Nke a abụghị otu Paul Pogba dịka ọ sitere na ụkpụrụ nke ezinụlọ France dị n'etiti.
Ihe omuma nke Paul Pogba na-akuziri anyi na nrọ adighi adi nma site na anwansi; ọ na-ewe ọsụsọ, mkpebi siri ike, ịrụsi ọrụ ike na nkwado sitere na ezinụlọ.
Ọ dị mkpa Lifebogger ịja mbọ nke mbọ Yeo Moriba - Nwanyị Iron nke nne rụrụ ọrụ dịka arịlịka, ụgbọ mmiri na iduzi nwa ya nwoke.
Anyị gbalịsiri ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ n'oge ịkọ akụkọ nwata ahụ Paul Pogba nwoke nwere mpako na Talent.
Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị mma ma ọ bụghị, kwuo okwu banyere ihe a na-ede akwụkwọ na midfielder. Iji nweta nchịkọta ngwa ngwa nke Paul Pogba's Bio, jiri tebụl anyị Wiki.
AJJ W WIKI
Age: 28 afọ na ọnwa 10.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 15 nke Machị, 1993.
Ebe amụrụ onye: Lagny-sur-Marne, France.
Ndị nne na nna: Yeo Moriba Pogba (nne) na mbubreyo Fassou Antoine Pogba (Nna).
Nwunye: Maria Zulay Pogba.
Nwa: Labile Shakur.
Ụmụnna: Mathias na Florentin Pogba (Twins).
Ndị ikwu: Sarita Pogba (Nwanyị Nwanyị) tinyere ndị ọzọ.
Ezinụlọ Ezinụlọ: Nna m bụ onye Guniea, mama m bụ onye Congo.
elu: Na sentimita (191cm), na mita (1.91m), na ụkwụ na sentimita (sentimita 6ft 3.1)
Igbe Mmetụta: 45 sentimita asatọ.
Ihe mkpofu na bicep: 34 Inch (Waist) na 13 Inches (Biceps).
Education: Roissy-en-Brie (ụlọ akwụkwọ football) na ụlọ ụlọ (site n'aka mama ya)
Aha otutu: Paul the Octopus, PogBoom, Black Spartacus na La Pioche.
Ihe akara Zodiac: Eke.
Egwuregwu Ọnọdụ: Etiti Ugwu.
Nwoke United United Annual Salary: £ 15,103,200
Net Net (2021): $ 200 ruo $ 250 nde
Onye ndụmọdụ Football: Paul Nwokocha.
Ndị Ntorobịa: Roissy-en-Brie (1999-2006), Torcy (2006-2007), Le Havre (2007–2009) na Manchester United (2009–2011).
Anthony Elanga Child Story gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị ekwu okwu